लकडाउनको समयमा अचानक घर बाहिर जानु छ भने अनलाईन बाटै यसरी पास लिनुहोस ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/लकडाउनको समयमा अचानक घर बाहिर जानु छ भने अनलाईन बाटै यसरी पास लिनुहोस !
लकडाउनको समयमा अचानक घर बाहिर जानु छ भने अनलाईन बाटै यसरी पास लिनुहोस !
नेपाल टेलिकमले नेपाल सरकारको कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर–सीसीएमसी सँगको देशमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । पहिलो चरणमा सो सर्वेक्षण सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने छ र क्रमश: प्राथमिकता अनुसार अन्य प्रदेशहरुमा समेत सञ्चालन गर्न सकिनेछ । सो सर्वेक्षणका लागि कम्पनीले सम्बन्धित प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा रहेका कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुलाई एसएमएस मार्फत जानकारी गराउने छ ।
रुकुम घटनाः ‘धरौटी’ तिर्न नसकेपछि किशोरीकी आमा ‘कारागार’ चलान अदालतले चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित २३ अ’भियुक्तलाई भने पुर्प’क्षका लागि का रागार ….